Off-Roobka dabayl nidaamka korontada hybrid qoraxda iyo naaftada - Shiinaha Renergy Qalabka Co., Ltd
Off-Roobka dabayl nidaamka korontada qoraxda iyo naaftada hybrid
Shaqaynta mabda'a nidaamka:
marawaxadaha dabaysha iyo guddi qoraxda korontada, korontada ayaa lagu eedeeyay galay group batteriga by xakamaysada xukun, ka dibna iyada oo inverter, ee AC awoodda nidaamka for xamuulka. matoor Diesel waxaa loo isticmaalaa sida xoogga dib a, waxaa ku bilaaban doono marka dabaysha iyo qoraxda ku filan yihiin, ka qaadaan galay batteriga si ay u ilaaliyaan batteriga.
Nidaamkan waxaa si balaadhan looga isticmaalaa meesha ma laha awood at meesha fog jiro; In si loo yareeyo isticmaalka tamarta iyo deegaanka wasakhda iyo badbaadin kharashka, waxaa khuseysaa dabaysha iyo qorraxda si ay ula kulmaan isticmaalka xoogga looga baahan yahay. Nidaamkan ka dhigi kartaa isticmaalka buuxo tamar cusub iyo kor u qaadista heerka awoodda cusub si loo yareeyo wasakhaynta isticmaalka naaftada iyo deegaanka iyo tamarta badbaadiyo
garoonka variable RW-5kW, DC240V
Off-Roobka qoraxda, dabaysha iyo xakamaysada hybrid naaftada
dabayl 5kW, qoraxda 5kW, DC240V
design Modularized; loo hagaajiyo isku halaynta nidaamka loo marayo design siyaado ah, kaasoo xaqiijinaya nidaamka weli shaqayn karin marka mid ka mid ah hoosaadyo uu leeyahay cillad.
awood Good damaanad siin
complementation tamarta Multiple; xakameeyo awood u qiimeeyo in ay u baddashaan naaftada si ay u isticmaalaan xoog marka tamarta nidaam aan ku filnayn iyo Dhanka gooyay load aan loo baahnayn in la ballaadhiyo waqtiga korontada nidaamka.
Tan iyo tamarta hoose waa shaki ka jiro oo xadidan, tayada nidaamka waa in la urursan; nidaamka qaadanayaa ku modules awood IGBT iyo hab gacanta PWM si loo yareeyo isticmaalka tamarta nidaamka.
Nidaamka adeegsanayaa design qaybsan in la damaanad qaado scalability nidaamka; siin ku biiro si loo kordhiyo awoodda xoog nidaam si aad u hubiso hagaajinta nidaamka
Codsiga nidaamka oo dhan wuxuu qaadanayaa hab automatic in la xakameeyo nidaamka iyo in la yareeyo gacanta aadanaha, ma aha oo kaliya in ay hagaajiso waxqabadka shaqada, laakiin sidoo kale kordhin ammaanka nidaamka iyo isku halaynta
codsiga Home, jasiiradda, tuulo yar, saldhigga awoodda yar, nidaamka Roobka micro, miyiga guriga, tirada yar, beeraha, ganacsiga.
waqti Post: Apr-03-2018